Zimbabwean Citizen Waves Flag in Protest of Mugabe
Takudzwa Marara, 27, waves a Zimbabwean flag in a protest in which people urged embattled, long-time President Robert Mugabe to resign. Mugabe was placed under house arrest by Zimbabwe’s military after the Nov. 14 takeover and was fired by his own ZANU-PF political party on Nov. 19, but hasn’t resigned. Marara says he will demonstrate in Africa Unity Square in Harare, Zimbabwe’s capital, until Mugabe leaves office, either by choice or impeachment.
Zimbabwe Takudzwa Marara, 27, waves a Zimbabwean flag in a protest in which people urged embattled, long-time President Robert Mugabe to resign. Mugabe was placed under house arrest by Zimbabwe’s military after the Nov. 14 takeover and was fired by his own ZANU-PF political party on Nov. 19, but hasn’t resigned. Marara says he will demonstrate in Africa Unity Square in Harare, Zimbabwe’s capital, until Mugabe leaves office, either by choice or impeachment.